Anyị nwerendị injinia na ndị na-emepụta ihenwere ahụmahụ bara ụba
na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.Ndị otu R&D na ndị na-ere ahịa na-achọta nke angwọta njedebe na njedebeimezu ebumnuche gị.
Anyị enweghị atụ ma a bịa na nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ, na-enwe naanị echiche sitere n'aka ndị ahịa.Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ site na nkwakọ ngwaahịa anyị dị ugbu a ma ọ bụ soro anyị rụọ ọrụ iji mepụta ụdị omenala kpamkpam.Ma ọ bụ naanị mee ka anyị mara maka echiche gị na ebumnuche gị maka nkwakọ ngwaahịa ịchọrọ, ị nwere ike nweta nhazi ahụ n'otu ụbọchị na nzaghachi ngwa ngwa anyị.
Na nke a na-adọ, anyị engineer ga-arụ ọrụ gị echiche na-ọzọ ahaziri na n'ibu imewe site Pro-e ma ọ bụ Solidworks.The mmepe na-aga n'ihu na-n'ihu nụchara anụcha 3D elu na siri ike nlereanya, na anyị na-eme ka prototype ụdị na teknuzu echiche eserese.R&D anyị nwere ike ịmepụta ezigbo imewe site na iji ndị na-azụ ahịa yana mkpesa shelf na arịrịọ gị.
Ozugbo emebere atụmatụ anyị, ndị otu R&D anyị ga-enyere gị aka ịkwado echiche ahụ.Anyị nwere ike nweta nlele ngwa ngwa 3D n'ime otu izu, mgbe ahụ ịme anwansị arụmọrụ, nnwale ndakọrịta bụ akụkụ dị mkpa na usoro a.Ma anyị ga-aga n'ihu na-emeziwanye nhazi ahụ ruo mgbe anyị ruru ihe mgbaru ọsọ gị.
Ọ bụrụ na imewe gị dị mkpa iji wuo ebu ọhụrụ, injinia anyị nwekwara ike inyere ndị ahịa anyị aka imepụta ihe eji eme ihe.Ozugbo a kwadoro echiche ndị ahụ, anyị nwere ike ịmalite ụlọ na-akpụ akpụ na ule tupu mmepụta oke. Ma anyị ka nwere ike ịkwalite echiche gị tupu ịmecha mauld.
Ndị injinia ihe owuwu
Ahụmahụ bara ụba na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, maara nke ọma ụdị usoro teknụzụ dị ka extrusion mmetụta, stampụ ígwè, injection plastik na ihe ndị ọzọ.Mara ụdịrị usoro ọgwụgwọ elu dị ka anodizing, eserese, etching laser na ihe ndị ọzọ.
Ndị na-emepụta ihe ịchọ mma
Ahụmịhe bara ụba na nkwakọ ngwaahịa akara, ama ama ama ama.Maara usoro maka nkwakọ ngwaahịa n'ahịa dị iche iche.
AKWỤKWỌ NKE AKWỤKWỌ NKE AKWỤKWỌ ANYỊ